ရေကြီးခြင်း၊ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း၊ မြေငလျင်၊ မြေပြိုခြင်းစတဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကို သူငယ်ချင်းဘ၀မှာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ကြုံဖူးပါသလဲ ?
7907 responded out of 25821 polled
ဘေးအန္တရာယ်တွေကြာင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ်စဉ်ဆုံးရှုံးမှုတွေ ဘယ်လောက်ရှိနေတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ ?
6619 responded out of 7282 polled
သဘာဝဘေးတွေကြောင့်ဖြစ်လာမယ့် အန္တရာယ်တွကို လျှော့ချဖို့ ဘယ်အချက်က အဓိကကျတယ်လို့ထင်ပါသလဲ ?
5914 responded out of 6278 polled
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းက သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို သက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ ထင်ပါသလား ?
5762 responded out of 5837 polled
မြန်မာနိုင်ငံမှာသဘာဝဘေးလျှော့ချဖို့နဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိရေးအတွက် လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အောက်ဖော်ပြပါတွေထဲက ဘယ်အချက်ကိုပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ ?
5383 responded out of 5570 polled
312 responded out of 347 polled
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းက မြန်မာ့လူငယ်တွေကို ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေရှိနေလဲ ?
3115 responded out of 4292 polled